Halbeegga ISO 3166 waa halbeeg ka soo baxay Ururka caalamiga ah ee halbeegyada (ISO) waxa uu bixiyaa summadaha dalalka Meelha aan madax bannaanayn iyo meelaha gaarka ah ee leh ahmiyad juqraafi qaybaheeda maamulka asaasiga ah. Magaca rasmiga ah ee halbeegaas waa «Summado ka turjimaya ama ka dhigan magacyada dalalka iyo qybaheeda maamul» (Af-Ingiriis: Codes for the representation of names of countries and their subdivisions).
2 Soo saaris
Waxa uu ka koobanyahay halbeeggaan saddex qaybood:
ISO 3166-1: Magaca rasmiga ah ee qaybtaan waa «Sumadaha ee ka turjumaysa magacyada dalalka iyo maamulka gobollada - qaybta 1: Furaha dalka» waxa uuna tilmaamayaa sumadaha magacyada dalalka iyo meelaha aan madax bannaanayn iyo meelaha gaarka ah ee leh ahmiyad juqraafi. Qaybtani waxa ay xaddidaysaa saddex kooxood ee summadaha dalalka:
ISO 3166-1 alpha-2: Kooxdaan wax ay bixinaysaa summado ka kooban laba xaraf, waana koox summado ee ugu badan kooxda saddexaad waxaa loo adeegsadaa sida badan Internet iyo Habka sare summadaynta dawladda (marka laga reebo inyar oo kooban).
ISO 3166-1 alpha-3: Kooxdani wax ay bixisaa summado ka kooban saddex xaraf, waxa ay oggolaanaysaa ka bedelnaan dhanka aragga muuqda ah summadaha dalalka ee adeegsiga summado ka kooban laba xaraf oo kaliya.
SO 3166-1 numeric: Waa koox summado ah kana kooban saddex lambar waxa ay aad ugu egtahay kooxda summadaha laga adeegsado qaybta tirakoobyada ee Qaramada Midoobay oo ay hormariyaan, sidoo kale waxa ay faaiido u leedahay habka qorista ee aan adeegsan xarfaha laatiinka.
ISO 3166-2: Magaca rasmiga ah ee qaybtaan waa «Summadaha u dhigan magacyada dalal iyo qaybaheeda maamul - qaybta 2: Summad qaybaha maamul gobol ee dal» waxa ayna tilmamaysaa qaybaha maamul rasmiga ah (sida Degmooyinka ama gobollada) ee dhammaan dalalka oo uu leeyahay dal summadaha ee ISO 3166-1.
ISO 3166-3: Magaca rasmiga ah ee qaybtaan waa «Summadaha ka dhigan magacyada dalalka iyo qaybaheeda maamul - qaybta 3: Summado magacyo dalal ee horay loo adeegsan jiray» waana mid xaddidaya summada dalal taasoo la baabi'yay dhanka ISO 3166-1 ilaa intii la baahiyay markii ugu horraysay caalamka 1974.
Waxaa la baahiyay soo saarkii ugu horreeyay ee halbeeggaan sanaddii 1974 kaasoo ka koobnaa kaliya summado juqraafi daleed. Sidoo kale waxaa la baahiyay soo saarkii labaad ee sanaddii 1981 kaasoo lagu kordhiyay summado lambarro ah. Waxaa la baahiyay soo saaristii saddexaad sanaddii 1988 kii afaraadna wuxuu ahaa 1993. Laakiin soo saarista shanaad waxaa la baahiyay intii u dhaxeysay sanadihii 1997 iyo 1999 Halka waxaana lagu kordhiyay saddex qaybood waxaa lagu gordhiyay sumadaha qaybaha gobollada iyo dalal hore.
↑ 1.0 1.1 . 22 Jannaayo 2014 http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm. Hubi qiimaynta taariikhda: |date= (caawin); Maqan ama ebar |title= (caawin)
Summado dalal hadba halbeeg ISO 3166-1
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro ISO 3166.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_3166&oldid=162741"
Last edited on 16 Oktoobar 2016, at 16:00
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 16 Oktoobar 2016, marka ee eheed 16:00.